I-Pixel 3 XL isungula eHong Kong ngaphambi kwengcaciso yayo | I-Androidsis
Ngomso, nge-Okthobha i-9, iGoogle Pixel 3 iya kuziswa ngokusesikweni, kunye nePixel 3 XL. Isizukulwana esitsha sefowuni eziphezulu ezivela kwinkampani, ethe kulo nyaka yabandezeleka kukuvuza okuninzi. Kodwa izinto ziye zaya kwelinye inyathelo. Ukusukela nangaphambi kokunikezelwa kwayo, imodeli yeXL sele ithengisiwe eHong Kong. Isibetho esinye kuGoogle.
Kule mpelaveki ziphume iindaba zokuba IPixel 3 XL sele ithengiwe ngokusemthethweni eHong Kong. Ivenkile yefowuni ebizwa ngokuba yiWahPhone Digital ibeke isixhobo esithengiswayo, ngexabiso elimalunga ne- $ 2.000 yokutshintsha.
Olu phehlelelo olungalindelekanga lusinceda ukuba qinisekisa ukuvuza okuthile ebesifikile evela kule fowuni ukuza kuthi ga ngoku. Ngaphambi kokunikezelwa kwayo sele siyayazi into ekufuneka siyilindele kule Pixel 3 XL ngokwemiqathango.
Sifumana Ubungakanani besikrini esingu-6,3-intshi esine-2.960 x 1.440 isisombululo sepikseli. Njengeprosesa isebenzisa iQualcomm Snapdragon 845, njengoko sisazi ixesha elide. Iza ikhatshwa yi-4 GB ye-RAM kunye ne-128 GB yokugcina kwangaphakathi. Ukongeza, isixhobo sinobungakanani bebhetri ye-3.732 mAh.
Yayisele isaziwa loo nto le Google Pixel 3 XL iya kuba nekhamera ngasemva enye, kule meko iyi-12,2 MP. Ngaphambili i-8 MP sensor ilinde thina, eza nekona ebanzi ibandakanyiwe. Njengenkqubo yokusebenza esemgangathweni, sele iza nePie ye-Android 9.0. Ekumiselweni kwayo eHong Kong, iza ne-USB-C ukuya kwi-3,5m iadaptha, isibini see-headphone ze-USB-C, intambo yokutshaja ye-USB-C, kunye neadaptha ye-18W.
Ngomso siya kuzazi iinkcukacha ekufuneka sizazi ngale Google Pixel 3 kunye nePixel 3 XL. Ixabiso lokuthengisa eYurophu kunye nomhla wokuqaliswa kwayo awaziwa.. Kodwa ngekhe silinde ixesha elide ukufumana le datha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-Google Pixel 3 XL iyathengiswa ngaphambi kokunikezelwa kwayo